विश्वासको आवाज – Online Theological/Ministerial Portal
Online Theological/Ministerial Portal
क्रिसमस कि एक्समस!
Biblical Principles in Beating Poverty
औषधिविज्ञान बाइबलको विज्ञान हो
झूटा शिक्षकहरूले ख्रीष्टियानहरूलाई नै किन खोज्छन्
क्रिसमस कि एक्समस !
क्रिसमसको बेला तपाईंहरूमध्ये कतिले सायद व्यापारिक केन्द्रहरूमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाको एक्स्–एम–ए–एस (Xmas) लेखेको देख्नुभएको होला। यसलाई उच्चारण गर्नुपर्दा मानिसहरूले हम्मेसी 'एक्समस' भन्दछन्, तर यसको वास्तविक उच्चारण 'एक्समस' नभएर 'क्रिसमस' नै हुन्छ।…
क्रिसमस शब्दको उत्पत्ति
अचेल चलाइने 'क्रिसमस' शब्दलाई ई.सं. १०३८मा 'क्रिस्टेस म्यास्से' (Cristes Maesse) को रूपमा चलाइएको पाइन्छ, यसले 'प्रभुभोज' मानेको अर्थ दिँदथ्यो। ई.सं ११३१मा आएर यसले 'क्रिस्टेस–मेस्से' (Cristes-messe) को रूप लियो।/1/ याद गर्नुस्,…
डक्टर र औषधि माध्यम मात्र हुन्। आखिर निको पार्ने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। निष्कर्षः आधुनिक औषधिविज्ञान बाइबलको विज्ञान हो! https://youtu.be/sFwgXAvzqAs
गणेश तामाङ मलाई जस्तै तपाईंलाई पनि लागेको हुनुपर्छ, ‘‘झूटा शिक्षकहरू किन ख्रीष्टियानहरूकै घर–दैलो चाहर्दै हिँड्छन्? येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई किन खोज्दैनन्?’’ यसको उत्तर यहाँ छ। https://youtu.be/-FF4xDM0SRc
दिने व्यक्तिलाई परमेश्वरले बिर्सनुहुन्नः अगस्टिनको जीवनी
भोजराज भट्ट बाइबलले भन्छ मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको प्राणी हो। सुन्दा नै अचम्म लाग्‍ने! मानौं, मानिस परमेश्वर जस्तै छ! हो पनि! संसारमा न कुनै चिज छ न त कुनै प्राणी जससँग मानिसको तुलना…
झूटा शिक्षकहरूले ख्रीष्टियानहरूलाई नै किन खोज्छन् ?
गणेश तामाङ म मेरो अनुभवबाट विषयवस्तु शुरु गर्न चाहन्छुः ईश्वी संवत् २०००को फेब्रुअरीमा हामी काठमाडौँको मैजुबाहलमा डेरा लिएर बसेका थियौँ। दुई जना केटाहरू ख्रीष्टियानलाई नै खोज्दै आएका रहेछन्। तिनीहरूको कुन…
औषधिविज्ञान बाइबलको विज्ञान हो II Modern Medical Science Derives from the Bible – पा गणेश तामाङ
पास्टरज्यू, तपाईंको वचन प्रचार कस्तो छ?
भोजराज भट्ट परमेश्वरीय सेवामा पास्टरीय बोलावट सबैभन्दा गहन बोलावट हो। एउटा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा पास्टरले उसलाई साथ दिनुपर्दछ। दुःख होस् या सुख, रात होस् या दिन, बेला न कुबेला पास्टरले आफ्नो…
Copyright © 2020 विश्वबसको आवाज - Developed By: Universal IT